प्याथोलोजी सेवाहरुमा छुटको व्यवस्था – CIN Nepal News & Online Radio Network
प्याथोलोजी सेवाहरुमा छुटको व्यवस्था
By श्याम सुन्दर सुतिहार	 On २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २०:३४
विराटनगर । कोशी अस्पताल विराटनगरको अगाडि रहेको तुलसी प्याथोलोजीले चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्याथोलोजी सेवाहरुमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्याथोलोजीहरुको प्रतिस्पर्धामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा दिदै आएका तुलसी प्याथोलोजीवाट जेष्ट नागरिक, शहिद परिवार, अशक्त, विपन्न र पत्रकारहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिने अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक कैलाश प्रसाद साहले वताए ।
त्यसैगरी डाईविटिज डे र हार्ट डेमा सुगर जा“च शतप्रतिशत छुटको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै तुलसी प्याथोलोजीको निशुल्क मेम्वर सिप कार्ड लिनेहरुलाई ३० प्रतिशत छुट र शनिवार आउने सेवा ग्राहीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
उक्त प्याथोलोजीमा सीवीसी, एइसी, एलएफटी, आरएफटी, एलआईपीआईडी, पीआरओएफआईएलइ, सीइए, सीए१२५, एचवीएआईसी, एफएसएच, एलएच, पीआरएल, टेस्टोकटेरोइन, भिटामिन डी, सुगर, यूरीन र स्टुल लगायत स्पेशल जांचहरु गर्दै आएको छ ।
चौथो वार्षिक उत्सवको प्रमुख अतिथीको रुपमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउं अस्पतालका डा. विपेश आचार्यको उपस्थिती रहको थियो ।
हेमाटोलोजिष्ट नेपाल भरीमा १५÷२० जना मात्र रहेकोमा काउन्सीलमा कैलाश प्रसाद साहको दर्ता नं. ८ रहेको वहां अमेरीका वाट गोल्डमेडलिष्टको अवार्ड पाईसकेको छ ।
सूचीकरणका लागि संघर्ष गर्दै महासंघ
अभिभाकत्व ग्रहण गरेपनि जिम्मेवारी अनुसारको पठन पाठनको ब्यवस्था मिलाउन सकेनन